Nhau - 2020 OTAO Yegore Bato rakaitwa musi waJan 20th
Nekuputika kweiyo coronavirus nyowani pakutanga kwegore, nyika dzese dzinonyatso kudzora kupinda kwevanhu, izvo zvinokanganisa zvakanyanya kutengeserana kwepasi rose. Nekuenderera mberi kubviswa kweasina kuratidzwa, huwandu hwekutengesa hwevatengi vepamhepo vatengesi hwaderera zvakanyanya, mashandiro evamwe vatengesi anga achidzikira, uye kunyange maindasitiri akasiyana anga ari mukutambudzika kwakanyanya. Mabhizimusi ehukuru hwakasiyana zvakare abhuroka nekuda kwekudzikiswa kwekutengeswa kwekutenga.
OTAO ine boka revadiki vanotsunga kushanda nesimba uye vakatarisana nedambudziko. Pasi pechirwere mamiriro, iyo OTAO timu inogara ichifunga nekutsvaga dzimwe nzira uye inogadzira zvishamiso zvekutengesa mashandiro, izvo zvinoita kuti bhizinesi irambe ichizorodza marekodhi ekutengesa uye kutiita kuti titarike mumunda wechengetedzo wedziviriro.
Musi wa20 Jan, OTAO Annual Party yakaitirwa muLiuyue Hotel, Shenzhen City. Mhemberero yese yainakidza uye yaidziya. Mhemberero iyi yakapera nemutambo wekuratidzira, mibairo, kutaura kwemaneja mukuru weOTA uye mutambo wekudya kwemanheru.
Mr.Andy, General Manager, vakati: "Muna 2020, nharaunda yekutengeserana yekunze yakanga isina kunaka. Rakanga riri basa rakaoma kuita mutengesi wekunze pasirese. Muna 2021, zvese zvese mavambo matsva; mushonga unotanga munyika dzese nhanho nhanho. Zvichava zvinonetsa, asi isu tese tine chivimbo chekukunda kuoma, uye kusvika padanho repamusoro idzva. "
Sekutariswa kumashure pa2020, OTAO yakaramba ichikura uye ichikura. Tese takaedza kuita kuti hupenyu huve nani. Ese maNhengo anogara achirangarira basa, uye vachishanda nesimba kuti vave nechokwadi chekuburitsa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvevadziviriri vechidzitiro.
Raki rerombo rakaitika mushure memubairo. Mhepo yakatyisa uye yainakidza, uye vazhinji vatinoshanda navo vakawana chipo chinoshamisa. Yaive yekudyira inodziya uye inowirirana nenhengo dzechikwata chedu, uye tese tichaedza nepatinogona napo kuti 2021 igore riri nani.